Led Container Vagadziri & Vatengesi | China Yakagadzwa Mudziyo Fekitori
20ft akatungamirira mugaba-PASI CHASSIS
CT 20-tsoka yakatungamirwa mudziyo-isina chassis （Muenzaniso: E-CON20） ndiyo nyowani uye inyore nharembozha yekuratidzira shopu (hwindo) yemabhizinesi ekuratidza zvigadzirwa nekusimudzira brand.
40ft akatungamirira CONTAINER-FOTON AUMAN
Iyo 40ft LED CONTAINER-FOTON AUMAN （Muenzaniso: E-C40） yakagadziriswa naJingchuan inogadziriswa uye inogadzirwa ne semi-trailer chassis. Iyo mota yemuchadenga yakarongedzwa nehombe hombe yekunze-yakazara LED skrini ine skrini nzvimbo ye40 mativi emamita. Iyo inokodzera zviitiko zvakakura-zviyero uye nhepfenyuro dzeTV seyekutepfenyura mhenyu uye nhepfenyuro, inogona kuona kure kure kutepfenyura mhenyu uye rebroadcast.
15ft yakatungamira mudziyo-isina chassis
Mumisika yemhiri kwemakungwa, inotungamirwa mudziyo iri muchikamu chekukurumidza kukura uye kukura. Parizvino, mutengo wemotokari dzemidziyo dzakatungamirwa dzakagadzirwa kuChina dzinenge 30% -50% yezvigadzirwa zvemhiri kwemakungwa. Izvi zvinotibvumidza isu kuve nemutengo wakakura.
40ft akatungamirira Container-CIMC
JCT 40ft LED Container-CIMC （Muenzaniso: E-CON40） imotokari yakakosha inoenderana nemitambo yefoni uye inogona kuendeswa muchikamu. Iyo 40ft LED Container yakashongedzerwa neyekunze LED yakakura skrini, yakanyatsoita otomatiki hydraulic nhanho, uye nyanzvi odhiyo uye mwenje.
Mobile Yakatungamira Screen Rori, Akatungamira Mobile Trailer, Nhare Yakatungamirwa Billboard Rori, Akatungamira Nhare Yekutengesa, Mobile Yakatungamira Kushambadzira Rori, Akatungamirira Mobile Rori,